lundi, 04 novembre 2019 20:14
Fitsidihana: Tonga eto Madagasikara ny Praiminisitra lefitra sinoa, Sun Chunlan
Mitsidika firenena telo aty Afrika dia i Madagasikara, Namibia ary Ghana ny Praiminisitra lefitra misahana ny filankevi-panjakan'ny Repobika entim-bahoakan'i Chine, Sun Chunlan, ny 4 ka hatramin’ny 13 novambra 2019.
I Madagasikara no nisantarany ny fitsidihany. Tonga nitsena ny delegasiona sinoa teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny hariva teo ny praiminisitra lehiben’ny governemanta sady misahana vonjimaika ny ministeran’ny raharaham-bahiny Ntsay Christian, sy ireo mpikambana ao amin'ny governemanta.
lundi, 04 novembre 2019 19:56
Sahasinaka – Manakara: Fiara nitondra faty tra-doza, naratra ny ankamaroan'ny mpandeha
Olana ara-mekanika, hisatra, no voalaza fa fototry ny loza, ka tsy voafehy ilay fiara fa nandika tatatra ary nifatratra tao anaty kirihitra. Naratra ny ankamaroan’ireo fianakaviana niaraka tamin’ny faty tao anaty fiara. Nisy fahasimbana goavana ny fiara, izay fanomezana avy amin’ny fikambanana Zana Gasy.
Tsy nisy aina nafoy.
lundi, 04 novembre 2019 19:25
Carlton: Atrik'asa fanatsarana ny tolotra momba ny famokarana akanjo
Notanterahina tetsy amin’ny Carlton Anosy ny atrik’asa izay hiarahan’ny firenena Britanika sy Malagasy, karakarain’ny UKTP mahakasika fanatsarana ny harifenitra an’ireo vokatra famokarana lamba sy akanjo na textile eto Madagasikara.
Hisy ny fitadiavana vahaolana amin’ity atrik’asa ity izay fifampiraharahana amin’ny fanjakana satria mety hisy ny tsy fahafahan’ny orin’asa miodina.
Vonona ny UKTP hanampy ny fanjakana ahafahana manodina ireo akora fototra. Ny UKTP ihany koa dia manampy ireo orin’asa ahafahana manodrana any Royaume unie, ary manome fanampiana amin’ny fanamafisana ny traik’efa eo amin’ny ministera sy ireo sampam-panjakana samihafa.
lundi, 04 novembre 2019 19:22
Lycée Technique Professionnel: Mitaraina ho tsy mbola nandray karama ireo mpiasa ECD sy « Vacataire »
Velontaraina ireo mpiasa ECD sy « Vacataire » eo anivon’ny Lycée Technique Professionnel sy CFP (Centre de Formation Professionnelle) saika manerana an’i Madagasikara fa volana maro no tsy nandray karama. Folo volana ny an’ny sasany, ny an’ny hafa mananika ny herintaona ny karama tsy azo, nefa ity ny taom-pianarana vaovao efa hanomboka.
Efa nangataka fihaonana tamin’ny Minisitra mpiahy ny fampianarana teknika izahay nandritry ny efatra andro fa tsy nahazo ka amin’ny alarobia 6 novambra 2019 izao no hisy fivoriana hanapahana hevitra amin’ny hetsika izay hataonay, hoy ireto mpiasa ireto.
lundi, 04 novembre 2019 19:15
Bakalôrea 2019: Hivaly amin’ny alakamisy ny andiany faharoa manokana
Nanao fampahafantarana amin’ny takelaka facebook azy ny ministeran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa, fa hivoaka amin’ny alakamisy 7 novambra 2019 izao ny voka-panadinana bakalôrea andiany faharoa manokana, izay notanterahina ny 23 ka hatramin’ny 26 oktobra 2019 teo.
lundi, 04 novembre 2019 19:13
EPP Belobaka- Mahajanga II: Alefa mody ny mpianatra tsy nahaloa saram-pisoratana anarana
Mitaraina ireo ray aman-drenin’ny mpianatra manoloana ny fepetra raisin’ny mpitantana ny sekolly EPP eto Belobaka, Mahajanga II. Tsy tafiditra an-dakilasy izay tsy nahaloa saram-pisoratana anarana.
Manamarika ireo ray aman-dreny fa tsy misy mpampianatra FRAM ao amin’ity EPP Belobaka ity, ka tsy misy antony tokony handoavan’izy ireo vola raha toa ka handoavana tambinkarama, ny fanjakana rahateo efa nampanantena fa maimaimpoana ny fampidirana mpianatra amin’ity taom-pianarana ity.
Amin’ny 8 novambra 2019 no voalaza fa hisy fivoriana hanapahan-kevitra ny amin’ireo mpianatra tsy nahaloa saram-pisoratana anarana ireto.
lundi, 04 novembre 2019 12:07
Dadah (Mahaleo): Hiaretan-tory ao amin’ny Palais des sports amin’ny alarobia
Nampahafantatra ny fandaharam-potoana ao amin’ny pejy facebook an'ny tarika Mahaleo, i Charles sy Bekoto ary Dama ao amin’ny tarika Mahaleo amin’ny fanomezam-boninahitra farany ho an’i Andrianabela Rabekoto na Dadah, mpikambana tao amin’ny tarika, izay nodimandry omaly alahady 3 novambra 2019.
Ao an-tranony ao Tsarasaotra-Antsirabe ny razana no vangiana ity alatsinainy 4 novambra ity sy ny talata 5 novambra.
Hiakatra aty Antananarivo ny nofomangatsiaka ny alarobia 6 novambra, ary ao amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina ny famangiana sy alim-bavaka.
Mody an-tanindrazany any Mandrosoa Distrikan’i Betafo, toerana handevenana azy i Dadah ny Alakamisy 7 novambra 2019.
lundi, 04 novembre 2019 10:47
Place au commun accord
La langue malagasy, comme ses cousines austronésiennes/malayo-polynésiennes, est une langue agglutinante, c’est-à-dire une langue qui a recours à des ajouts de suffixes pour exprimer les nuances grammaticales de la phrase.
Dans notre cas, le terme radical ou la racine « era » est traduit par « demande de permission » et peut être préfixé en « miera », devenu le verbe signifiant « demander la permission ». « Ierana/nierana » se comprend comme l’état d‘une chose dialoguée, donc un « compromis » au niveau des belligérants.
L’Assemblée nationale (AN) n’est-elle pas traduite en « An-Teni-Mieram-Pirenena » ? « Lieu où l’on demande la permission de la nation », ce lieu est considéré dans la représentation populaire malagasy comme l’antre de la Démocratie depuis la chute de la 2nde République, car normalement c’est là que sortent toutes les lois régissant le pays.
lundi, 04 novembre 2019 10:34
Randriamparany Jean Bosco: Manao ranolava ireo mpanohana azy
Ora sisa isaina dia hisokatra amin’ny fomba ofisialy ny fampielezan-kevitra amin’ny fifidianana Ben’ny tanàna sy mpanolontsain’ny tanàna, izay hatao ny tontolo andron’ny alarobia 27 novambra 2019 ny latsa-bato. Samy mandamindamina faramparany ireo kandida hiatrehana ny fanokafana rahampitso.
« Ny tonga miaraka ny anay no fanombohana, ary ny miasa miaraka no fahombiazana », hoy Randriamparany Jean Bosco, kandida Ben’ny tanàna narotsaky ny Tiako i Madagasikara ao amin’ny Kaominina Ambohitrolomahitsy Distrikan’i Manjakandriana.
lundi, 04 novembre 2019 08:57
Marco Ilaimaharitra: An-dranomaso no nivoahany ny kianja, niharan’ny fanavakavahana
Nanamaloka ny andro faha-14 amin’ny fiadiana ny tompondakan’i Belzika (Pro League) amin’ny diviziona volohany, sokajy A amin’ny baolina kitra, ny horakoraka fanavakavahana, nataon’ny ampahana mpijery, nihatra tamin’i Marco Ilaimaharitra, nandritra ny fihaonan’ny Sporting Club Charleroi klioba ilalaovany sy KV Malines.
Niezaka nanazava tamin’ny mpitsara afovoany ny zava-mitranga i Marco Ilaimaharitra. Izy indray no nahazo karatra mavo taorian’izay. An-dranomaso no nivoahan’i Marco Ilaimaharitra ny kianja, namonjy ny efitrano fiomanana naterin’ireo namany.
Nirava ady sahala 2 noho 2 ny ekipa roa tonta.